DJI Phantom2Vision Plus Review (In Myanmar) - Myanmar Tutorial | Myanmar Teach | Mobile App |
Home » IT-News » DJI Phantom2Vision Plus Review (In Myanmar)
DJI Phantom2Vision Plus Review (In Myanmar)
Initial test footage
ကောင်းတဲ့အချက် = DJI Phantom Vision ၏ 2+ ရလွယ်ကူပြီး-set up လုပ်ပြီးဝေဟင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုနောက်ဆုံးတွင်ရိုးရှင်းသော-To-လေယာဉ်မှူးက quadcopter မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ, ပျံသန်းဖို့ကောင်းစွာ-constructed ပျော်စရာင်၎င်း၏လူတန်းစားများအတွက်အလွန်ကောင်းသောဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပြီး painlessly ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတစ်ဦးလေယာဉ်လမ်းကြောင်းကိုသွားလာရန်သတ်မှတ်နိုင်တယ်။
ဆိုးတဲ့အချက် = ဗီဒီယိုအရည်အသွေးနိမ့်အလယ်အလတ် POV ကင်မရာနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်များအများဆုံး RTF copters များထက်ပိုရှည်သော်လည်း, သင်သည်ကုန်ကျစရိတ်သို့တစ်ဦးအပိုဆောင်းဘက်ထရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုနှင့်ယာဉ်အပိုပန်ကာအတွက်ဆခွဲကိန်းခွဲချင်တယ်လိမ့်မယ်။ မြေပြင် Control features ကိုပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ user တွေအတွက်လွန်းန့်အသတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဝေဟင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုလောကသို့အောက်ဆုံးလိုင်းတစ်ခုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ entry ကိုအမှတ် DJI ရဲ့ Phantom2Vision ၏ + ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ထိုက်ပေ၏။
သင့်ရဲ့ပျမ်းမျှအားကစားစရာ quadcopter ထက်မဟုတ်ဘဲ DIY ဝါသနာအိုးမော်ဒယ်များအဖြစ်ခြိမ်းခြောက်အဖြစ်ပိုအစွမ်းထက်သည် DJI Phantom2Vision ၏ + ကောင်းကင်မှဗီဒီယိုနှင့်ဓါတ်ပုံများကိုဖမ်းယူစတင်ရန်လိုသူမည်သူမဆိုအဘို့အမွှေးအစက်အပြောက်ချလိုက်၏။
ကောင်းပြီ, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသစ်တစ်ခုကိုဝါသနာအပေါ်နှမြောမှ $ 1,160 ရှိပြီးသူမည်သူမဆို။ (ဗြိတိန်တွင်ပြန်လှည့်ပတ်စတာလင်ပေါင် 890 သင်ထားနှင့်သြစတြေးလျတွင်အာဖရိကသမဂ္ဂနှင့် ပတ်သက်. ဒေါ်လာ 1,300 ပါလိမ့်မယ်။ ) ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်တောင်အဆင်သင့်-To-ပျံတက်အ Vision ၏ + box ရဲ့ထွက်သည်နှင့်ရိုက်သွင်းစဉ်းစားသင့်တင်ဈေးပါပဲ။
သင် (သင်သင်တန်းကိုသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ပျံ, ရှေ့တော်၌ပြုရမည်) ၎င်း၏ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်လက်စွဲကိုဖတ်ရှုဖို့မရပ်တန့်ဘူးဆိုရင်သင်တို့ 10 မိနစ်အတွင်းလေထုထဲရှိတက်ကကိုဖြည်ချပြီးမှသွားနိုင်ပါတယ်။
တနည်းကား, များစွာသောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် Vision ၏ + တက် setting မှရှိမနေပါဘူး။ အဆိုပါပန်ကာအပေါ်ထွက်သွားပြီးခံရဖို့ရှိသည်, သို့သော်သူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါကြောင့်သင်မှားယွင်းစွာပြုမပြုပါနှင့်ထို့ကြောင့်သူတို့အဖြစ်ကိုမကြာမီ copter ယူ-off မှာတက်သည် spins အဖြစ်ကို lock သူတို့ Self-တင်းကြပ်စွာင်အမှတ်အသားပြုထားပါတယ်။
ထိုမျှော်မှန်းချက် + ဘက်ထရီဗူး, ကြိုးမဲ့အကွာအဝေးတိုးချဲ့နှင့်တစ်ဦးမှာ Android သို့မဟုတ် Apple က iOS mobile device တစ်ခုခု: သင်ပျံလာမှီသင်တို့ကိုတက်ကိုအားသွင်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အရာသုံးခုရှိတယ်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားထိန်းချုပ်မှုစလေးခု, AA-size ကိုဘက်ထရီလိုအပ်သည်။
အကွာအဝေးတိုးချဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် wall adapter (မပါ) သို့ချိတ်ဆက် Micro-USB port ကိုမှ၎င်း၏အာဏာဆွဲယူနေစဉ် copter ရဲ့ဘက်ထရီတစ်ခုထည့်သွင်းမြို့ရိုးကို charger ကိုဒါမှမဟုတ် optional ကိုကားတစ်စီး charger ကိုမှတဆင့်တရားစွဲဆိုထားသည်။ နှစ်ဦးစလုံးသတိပေးချက်တခုအနည်းငယ်ပေးကမ်းတ charger ကိုမှပယ်ထိပ်ဆုံးရနိုင်ပေမယ့်သင်ပျံတက်မီတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ခုခုင်လျှင်၎င်းသည်ကောင်းတဲ့လိမ့်မည်။
သင်သည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်သင်တို့ကိုကင်မရာကိုတွေ့မြင်အရာကိုကြည့်ရှုခြင်း, ကင်မရာနှင့်၎င်း၏ setting တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့, Real-time ပျံသန်း telemetry ကြည့်ရှုရန်နှင့်အထိ 16 waypoints နှင့်အတူတစ်ဦး autopilot ပျံသန်းမည့်အစီအစဉ်ကို set up ပေးတယ် DJI ရဲ့ Vision ၏ App, တင်ဆောင်ဟာစမတ်ဖုန်းလိုပါလိမ့်မယ်။
ထိုမျှော်မှန်းချက် + ဧပြီလတွင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်ကတည်းကအနည်းငယ် app နဲ့ firmware ကို updates တွေကိုလည်းရှိခဲ့ဖူးသည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်တက်စွဲချက်တင်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့သင်ဟာ Windows သို့မဟုတ် Mac ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Phantom2Vision ၏ + လက်ထောက် software ၏နောက်ဆုံး version ကို install လုပ်၎င်း၏ Micro-USB port မှတဆင့် copter ချိတ်ဆက်နှင့်သင့် firmware ကိုစစ်ဆေးမွမ်းမံဖို့လက်ထောက် software ကိုအသုံးပြုချင်လာလိမ့် လိုအပ်ခဲ့လျှင်။
Price: $1,108.00 at Amazon
Sowpath das August 30, 2017 at 10:04 AM
Sarah Parton September 10, 2017 at 9:20 PM
I love DJI creations and Phantom2Vision plus Quadcopter is one of my favorites. I like the 3-axis gimbal, which delivers those super smooth videos. You can also check out the Walkera QR X400 here: http://mydronelab.com/reviews/walkera-quadcopters.html
If you have any question or, want to say something Please feel free to Comment below in the Comment box..Thanks
မေးချင်တာ ဒါမှအဟုတ် သိချင်တာရှိခဲ့ရင် ကျေဇူးပြု၌ အောက်က Comment Box မှာ ရေး မေးမြင်နိုင်ပါတယ်။
Zawgyi For iOS 7.0+
iOS 7.0+ အတွက် ဒီနေ့ Mobileconfig file (software) အသစ်ထွက်လားပါတယ်။ ဒီ Link ကိုသင့် iPhone, iPad ဒါမှမဟုတ် iPad Safari ဖြင့်ဝင်ပါ။► http:...
How to enable Myanmar Font in Viber (Myanmar Tutorial) Myanmar Version
Viber ကို PC ထဲမှာ ထည့်သွင်းနည်း ဒီ video tutorial မှာကျွှန်တော် Viber ကို PC or Windows အတွက် မြန်မာစား zawgyi ထည့်သွင်းနည်းကို ကျွှန်တော်...
How to Download Myanmar Keyboard for Windows 8
Download WinRAR 64 bit Download Myanmar Keyborad
iOS 7.1 မှာမွနျမာစား မွငျရဖို့အတှကျ
လကျရှိ အခွအေနအေရတော့ iOS 7.1 မှာ မွနျမာ စာ မွငျရဖို့ ဘယျလို မှ မဖွဈနိုငျသေးပါဘူး ။ တကယျလို့မွနျမာ စာ မွငျရခငျြတယျဆိုရငျတော့ အောကျက Zawgy...
Ios 7.0.4 , Reboot And Power Off ရင် Cydia Tweaks များ မပျောက်အောင် ဖြေရှင်းခြင်း
IOS 7.0.4 မှာ device ကို power ပိတ်မိသည့်အခါ reboot လုပ်မိသည့်အခါ cydia tweaks လေးတွေ setting မှာပျောက်သွားပြီး အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး အဲဒီပြဿ...
Copyright © 2013 Myanmar Tutorial | Myanmar Teach | Mobile App | All Right Reserved